Sehatra LMS maimaimpoana, maimaimpoana ary misokatra: Fomba sy fiasa | Avy amin'ny Linux
Sehatra LMS maimaimpoana, maimaimpoana ary misokatra: Fomba sy fiasa
ny Sehatra LMS na Rafitra fitantanana fampianarana an-tserasera, manolotra a safidy mahomby sy mahomby, hanavao ao Dingana fampianarana sy fianarana, izany hoe amin'ny fiofanana sy / na fizotran'ny fanabeazana.
Ny sasany amin'ireny dia noforonina miaraka Rindrambaiko maimaim-poana sy loharano misokatra ary / na tsotra maimaim-poana. Amin'izany fomba izany dia ahafahan'ny maro manararaotra ny ankamaroany fotoana, loharano ary fahaizana amin'ny vidiny mirary na aotra, indrindra amin'ny fotoan-tsarotra, toy ny iainantsika ankehitriny manerantany, miaraka amin'ny Coronavirus 19 na COVID-19.
ny Sehatra LMS no ampiasaina ao amin'ny sehatry ny akademika o ho an'ny fanabeazana / tanjona fanofanana, noho izany dia maro ny andrim-pampianarana na fikambanana mampiofana, miankina amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina, toa ny Oniversite, oniversite ary oniversite ireo izay manome azy ireo ho an'ny liana.
1 Sehatra LMS maimaimpoana, maimaimpoana ary misokatra
1.2 LMS canvas
1.4 Efitra an'arivony
Sehatra LMS maimaimpoana, maimaimpoana ary misokatra
Anisan'ireo miavaka indrindra amin'ny tsirairay Sehatra LMS maimaimpoana, maimaimpoana ary misokatra misy amin'ny tsena ankehitriny, azontsika atao ny manonona ireto manaraka ireto:
Izy io dia fitaovana azo sokafana misokatra hamoronana LMS Platforms.
Novokarin'ny ATRC Organization (Adaptive Technology Resource Center) tany Canada izy io.
Natao amin'ny PHP, Apache, MySQL, ary azo apetraka amin'ny Windows, GNU Linux na Unix Solaris.
Izy io dia ao amin'ny kinova 2.2.4, misy amin'ny fiteny 30 mahery, ary mifanaraka amin'ny SCORM kinova 1.2.
Izy io dia manana fitaovam-pampianarana elektronika (e-fianarana), toy ny Social Learning, Blogs, Forums ary Wikis.
Ny fametrahana azy sy ny fampiasana azy dia tsotra ihany, ary ahafahana manao adaptation mora foana ny modules sy ny lohahevitra.
Tena mifantoka amin'ny fahazoana miditra sy ny fahafaha-mihetsika izy hiantohana ny fahazoana miditra sy fanamorana ny fampiasana ireo olona mety manana fahasembanana.
Ny fatiantoka lehibe dia ny fisehoany tsy hita popoka, izany hoe ny endriny taloha sy tsy dia tsara. Ho fanampin'izany, tsy ampidiriny amin'ny fomba voajanahary ny fomba fandoavana / fanangonana, na toeram-pivarotana nomerika. Ary voafetra ny fahafahany mamaly tranonkala.
Raha te hahalala bebe kokoa momba an'ity fitaovana ity dia azonao idirana ny inona no vaovao amin'ny kinova ankehitriny ary ny famaritana ny modules izay mandrafitra azy.
Izy io dia sehatra LMS an-tserasera mifototra amin'ny loharano misokatra, ambanin'ny lisansa AGPLv3.
Novokarin'ny USA Development Software "Instructure, Inc." tany Etazonia izy io.
Izy io dia manana endrika sary manaitra sy sariaka, mifantoka amin'ny fitantanana ireo mpampiasa sy ny mpandrindra.
Izy io dia manana endrika maoderina, miaraka amin'ny fampiasana mora foana, ka izany no ampiasain'ny fikambanana malaza amin'ny fizotran'ny fampianarana elektronika (e-fianarana) azy.
Izy io dia manana fahaiza-manao mamaly amin'ny Internet, izay mahatonga azy io ho azo ampiasaina amin'ny fitaovana samihafa. Ho fanampin'izany, manohana ny teknolojia LTI (Learning Tools Interoperability) vaovao izy.
Izy io dia manana Dashboard misy tondro tsara hanohanana ny fizotry ny fianarana ary manana fahaiza-manao ara-tsosialy tena tsara, izany hoe, rafitra sy fitaovana hampiroboroboana ny fiaraha-mianatra.
Ny fatiantoka lehibe dia ny fampiasana fampiasa fanampiny amin'ireo fototra, tsy maintsy mandoa izany ianao, ary koa amin'ny fanohanana. Ankoatr'izay dia vitsy ny mety ho fanaingoana azy.
Raha te hahalala bebe kokoa momba an'ity fitaovana ity dia azonao idirana izany tranokala hafa efa ny toeranao ao GitHub.
Novokarin'ny fikambanana tsy mitady tombom-barotra "Asociación Chamilo" tany Espana izy io.
Ny "Association Chamilo" dia mikasa ny hampiroborobo ny fampandrosoana ary miantoka ny fampiasana ny LMS Chamilo Platform, ary manana ny iray amin'ireo tanjony lehibe indrindra, hiantohana ny fidirana malalaka amin'ny fanabeazana manerantany.
Ny anarany amin'ny teny espaniola dia midika hoe "Chameleon", izay taratry ny tanjony amin'ny maha-LMS Platform malalaka azy, azo ovaina sy azon'ny ankamaroan'ny maro, ka izany no antony ampiasana azy any amin'ny sekoly, oniversite ary institiota.
Izy io dia mamela ny fametrahana, fanovana ary ny famoronana singa mifameno mba hampifanaraka azy amin'ny filàna manokana amin'ny fizotran'ny fampianarana elektronika (e-fianarana), noho ny fisian'ny lisansa GNU / GLP v3.
Miorina amin'ny kaody an'ny LMS Dokeos Platform. Ary ampiasaina amin'izao fotoana izao any amin'ny firenena maherin'ny 180 eran'izao tontolo izao, miaraka amin'ireo mpisoratra anarana maherin'ny 20 tapitrisa.
Natao amin'ny PHP, Apache, MySQL, ary azo apetraka amin'ny Windows, MacOS ary GNU Linux.
Ny fatiantoka lehibe dia ny tokony hampidirina amina fitaovana hafa hahafahany mivarotra fampianarana amin'ny Internet (Marketplace). Ary koa, araka ny filazan'ny mpampiasa maro, mila fanavaozana tsy tapaka izy io, ary ny fianaran'ny mpampiasa dia tsy kilasy voalohany.
Raha te hahalala bebe kokoa momba an'ity fitaovana ity dia azonao idirana izany Bilaogy ofisialy ary ny fizarana avy amin'ny "Fanontaniana matetika" tranokala ofisialiny.
Sehatra LMS an-tserasera izy io mifototra amin'ny loharano misokatra, izay manolotra fampiantranoana maimaimpoana miaraka amin'i Moodle.
Fikambanana tsy miankina noforonin'ny Fans of Moodle no namolavola azy mba hanomezana tolotra LMS maimaim-poana, eo ambanin'ny tetikasan'ny orinasam-bola amin'ny alàlan'ny Google AdSense.
Ity serivisy ity dia manolotra ny fahafaha mampakatra ny fianaranao maimaimpoana ary mampiditra azy ireo ho hitan'ny besinimaro ao anatin'ny fepetra sasany, ka mahatonga azy io ho ilaina amin'ny tetikasa akademika malalaka sy karama.
Mamela anao hamorona mora foana ny vondron'olona mianatra an-tserasera anao, izany hoe efitrano fianarana virtoaly, miaraka amin'ny zana-tranony manokana, fidirana azo antoka, tombontsoa feno amin'ny fitantanana ary maimaimpoana tanteraka.
Ny tena lesoka dia ireo mpandray anjara (mpianatra na mpanjifa) iharan'ny dokambarotra, izay matetika no heverina ho ratsy na ambany kalitao avy amin'izy ireo. Ho fanampin'izany, voafetra ny fahafaha-mividy azy, satria tsy mampiditra modules fandoavam-bola izy io, ary ny vavahady noforonina dia tsy azo namboarina, izay zava-dehibe mba hanomezana azy fombafomba bebe kokoa amin'ny sehatra ara-barotra.
Raha te hahalala bebe kokoa momba an'ity fitaovana ity dia azonao idirana izany tranokala ofisialy aiza ny anao rehetra Fepetra, drafitra dokam-barotra ary fanomezana, Fitsipika momba ny famonoana sy famafana ny fampianarana, Famoronana kopia backup ary Fampiasana add-on. Ary azonao atao ny miditra amin'ireo tranokala noforonina niaraka tamin'ity fitaovana ity tamin'ny fampiasana ireto manaraka ireto rohy, hijerena ny fahafahany feno.
Izy io dia novolavolain'ny manam-pahaizana aostralianina pedagogue sy mpahay siansa Martin Dougiamas, izay namoaka ny kinova miorina voalohany tamin'ny 20 aogositra 2002.
Androany, ny Tetikasa Moodle dia tarihina sy mandrindra, avy amin'ny foiben-toeran'ny Moodle, izay fikambanana tohanana ara-bola amin'ny tambajotran'ireo serivisy manerantany na ny Moodle Partners.
Natao manokana izy io mba hanomezana ny mpandray anjara rehetra (mpampianatra, mpitantana ary mpianatra) rafitra iray mitambatra sy matanjaka ary azo antoka, miaraka amin'ny tontolon'ny fianarana manokana na misy vidiny mirary.
Tena azo namboarina io. Manohana ny fampidirana na fampivoarana ny modules sy ny fanao mahazatra, toy ny, vavahady fandoavambola, ny kaonferansa video, ny gamification.
Ny fatiantoka lehibe dia ny interface interface-ny izay tsy dia mandroso loatra na ho an'ny mpampiasa. Na amin'ny alàlan'ny fivoarany manokana na ivelany, maimaimpoana na karama, dia zavatra manana vahaolana, ao anatin'izany ny fanaingoana azy.
Raha te hahalala bebe kokoa momba an'io fitaovana io ianao dia afaka miditra amin'ny fizarana avy amin'ny "About" ary ny fizarana an'ny "Fanontaniana matetika" izay mandrakotra ny zavatra rehetra ilaina ary hazavaina mazava tsara momba ilay fitaovana voalaza. Aza hadino koa fa na dia Moodle dia manana antontan-taratasy ofisialy, misy vaovao marim-pototra azo antoka hafa, satria manana vondron'olona sy toerana goavambe izay ahitanao ny zavatra rehetra ilainao amin'ny fampiasana azy mahafapo.
Raha mila fanazavana fanampiny momba Sehatra LMS, mamporisika anao izahay hijery ny tranokala mahafinaritra an'ny Bit4learn, izay tena tsara eto amin'ity faritra ity.
"Bit4learn dia ivom-pahalalana momba ny olan'ny e-fianarana, ny tanjontsika dia ny afaka manome vaovao sarobidy izay manohana ireo rehetra te hanolo-tena amin'ny fampitana fahalalana amin'ny alàlan'ny fampiharana ireo teknolojia manakorontana". Momba ny Bit4learn.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «Plataformas LMS» maimaimpoana, maimaimpoana ary misokatra, izay manolotra safidy hafa Mahomby sy mahomby, mampianatra sy mianatra, indrindra amin'ireny fotoana ireny, rehefa teleworking ary ny teleed fanabeazana ilaina ary takiana, mahaliana sy mahasoa be, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Sehatra LMS maimaimpoana, maimaimpoana ary misokatra: Fomba sy fiasa
Jonathan Cavero Linares dia hoy izy:
Mihobia! Azonao atao ve ny manonona anay amin'ny lahatsoratranao, satria naka an-tsoratra loharano tao amin'ny tranokalanay ianao? Atte. Bit4learn
Valiny tamin'i Jonathan Cavero Linares
Miarahaba anao Jonathan! Mazava ho azy fa tena tiako ny tranonkalanao ary io no tena nalaiko fototra hamoronana ahy. Raiso ihany koa ho tranonkala fototra 2 hafa, miampy ireo tranokala tany am-boalohany an'ny LMS Platforms nohadihadiana. Tsidiho ihany koa izy ireo ary ampio ho referansa ao amin'ilay lahatsoratra mba hahafahan'ny olona manitatra fampahalalana bebe kokoa momba ny LMS Platforms miaraka amin'ny tranonkalanao. Ho an'ny ambiny, fahombiazana betsaka sy fahasalamana tsara ho an'ny rehetra.
Ny kinova vaovao an'ny LMDE 4 dia efa navotsotra ary ireo no fanovana azy
Mety hisy ny fitohanana amin'ny Internet, noho ny fitokanana manerantany an'i Covid-19